Banga sexy chat room, who is saleisha stowers dating
Banga sexy chat room uniforn dating
Bendiyazi ukuba kuzo tshaywa, u Anele ba lungisa I hubbly bubbly pipe kwatshaywa, Zen: “uyi qhaqhele ntoni wena intoko?Season 2 Chapter 71-100 Ndayo ngena e roomini yam, izinto bezi sangalandlela bendizi shiye zingayo ndakhulula ndayo ngena ebathroom ndaqala ndazi jonga esipilini ibingathi ayindim tu, bendingathi ndivuka kwelaba fileyo, ndayongena kwi shower, ndawuva umzimba wam uswabuluka,ndagqiba uhlamba ndazo sula ndanxiba I gown ndaphuma e bathroom ndaya e roomini yam ndafika kukho u Ongeziwe, ethetha ne phone Onge: “ewe tata.,..nanku..” wandinika I phone ndam jamela Onge: “ngu tatakho” Me: “hello tata” ndahlala phezu kwe bhedi u Onge wazo hlala ecaleni kwam Tata: “Ntondo unjani? ” Me: “akukho nto yenzekayo tata uyaxoka lo” Him: “I hope unyanisile” Me: “ndithembe tata, ungaze uyimamele into ayithethayo u Ongeziwe, uyaxabanisa ungena nezinto ezikude kunaye” Him: “okay ke mntanam, bye-bye” Me: “bye” he hung up ndanika u Onge I phone yakhe, bendinawo no msindo, Onge: “a..” Me: “GET OUT” ndamkhomba emnyango Onge: “ndi w….” Me: “I SAID GET OUT DAMMIT” waphakama waya ngasemnyango,ndamlandela bendiyo tshixa wama Onge: “izovela inya….” Ndamvuthulula ngempama wabetheka e cangweni ndamtsala nge vest ndavula umnyango ndamtshovela ngaphandle ndavala umnyango ndatshixa, bendingcangcazela man ngu msindo, ndehla ngecango ndahlala phantsi ndakhala, andizazi noba ndikhaliswa ngumsindo okanye yintoni na. ” Him: “u Ongeziwe nguye ondi fowuneleyo, kwenzeka ntoni? ” Him: “le yoba uyasela ngoku” ndajonga u Ongeziwe Me: “kutsho bani tata?Ndakhala ndaziva ukuba konele ngoku, ndaphakama ndayohlamba ubuso ndathambisa umzimba wam intloko ibisandi phethe straight, ndanxiba I pyjamas ezi mfitshane ndathambisa no buso nge body lotion.
Bendiyazi ukuba kuzo tshaywa, u Anele ba lungisa I hubbly bubbly pipe kwatshaywa, Zen: “uyi qhaqhele ntoni wena intoko?Season 2 Chapter 71-100 Ndayo ngena e roomini yam, izinto bezi sangalandlela bendizi shiye zingayo ndakhulula ndayo ngena ebathroom ndaqala ndazi jonga esipilini ibingathi ayindim tu, bendingathi ndivuka kwelaba fileyo, ndayongena kwi shower, ndawuva umzimba wam uswabuluka,ndagqiba uhlamba ndazo sula ndanxiba I gown ndaphuma e bathroom ndaya e roomini yam ndafika kukho u Ongeziwe, ethetha ne phone Onge: “ewe tata.,..nanku..” wandinika I phone ndam jamela Onge: “ngu tatakho” Me: “hello tata” ndahlala phezu kwe bhedi u Onge wazo hlala ecaleni kwam Tata: “Ntondo unjani? ” Me: “akukho nto yenzekayo tata uyaxoka lo” Him: “I hope unyanisile” Me: “ndithembe tata, ungaze uyimamele into ayithethayo u Ongeziwe, uyaxabanisa ungena nezinto ezikude kunaye” Him: “okay ke mntanam, bye-bye” Me: “bye” he hung up ndanika u Onge I phone yakhe, bendinawo no msindo, Onge: “a..” Me: “GET OUT” ndamkhomba emnyango Onge: “ndi w….” Me: “I SAID GET OUT DAMMIT” waphakama waya ngasemnyango,ndamlandela bendiyo tshixa wama Onge: “izovela inya….” Ndamvuthulula ngempama wabetheka e cangweni ndamtsala nge vest ndavula umnyango ndamtshovela ngaphandle ndavala umnyango ndatshixa, bendingcangcazela man ngu msindo, ndehla ngecango ndahlala phantsi ndakhala, andizazi noba ndikhaliswa ngumsindo okanye yintoni na. ” Him: “u Ongeziwe nguye ondi fowuneleyo, kwenzeka ntoni? ” Him: “le yoba uyasela ngoku” ndajonga u Ongeziwe Me: “kutsho bani tata?Ndakhala ndaziva ukuba konele ngoku, ndaphakama ndayohlamba ubuso ndathambisa umzimba wam intloko ibisandi phethe straight, ndanxiba I pyjamas ezi mfitshane ndathambisa no buso nge body lotion.” Me: “ndi hluthi, excuse me “ ndatyhala isitulo ndaphakama ndakushiya etafileni ukutya, ndaya e kitchen bendirhalela I coffee ndazi galelela ndabona isi tshixo semoto phezu kwe counter, ndaqala ndakroba kuqala ukuba akukho mntu uzayo na, ndasithatha, ibisese moto ka Luthando bendi dinga uphuma ndiyobethwa ngu moya ndayo ngena e motweni, ndahamba andizazi noba bendisiyaphi bendizula qha.